सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जा सार्वजनिक, ३८९ रुपैयाँमै पाइने ! « GDP Nepal
सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जा सार्वजनिक, ३८९ रुपैयाँमै पाइने !
काठमाडौं । पिज्जा हटले आफ्नो लाईटर, क्रिस्पियर र स्वादिलो सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जा सार्वजनिक गरेको छ ।
पिज्जा प्रेमीहरुले आनन्द लिने सक्ने सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जामा शेफको विशेष सस र एक्स्ट्रा भर्जिन आलिभ आयल ड्रिजलको प्रयोग गरिन्छ । सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जा, पिज्जा हटको मेनुमा मात्र रु. ३८९ बाट उपलब्ध छ । यसको भेज/ननभेज दुबैको मज्जा लिन सकिन्छ ।
यो पिज्जा बनाउन सावर डोको प्रयोग गरिन्छ जसले सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जालाई हल्का, क्रिस्पी बनावटको साथ अद्वितीय र विशिष्ट स्वाद दिन सयोग गर्दछ ।।
विशिष्ट आवरण भएका ह्यान्डक्राफ्टेड पिज्जाहरुको माग बढ्दै गइइरहेको समयमा सान फ्रान्सिस्को शैलीको पिज्जा उपभोक्तामाझ पहिलो रोजाइ बनेको छ । काठमाडौँ भरीका ग्राहकहरुले कुनै पनि उपलब्ध एग्रीगेटरहरुमार्फत डेलिभरीको लागि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र उत्कृष्ट डाइन–इन वा टेक–अवे अनुभवको लागि नजिकको पिज्जा हट रेष्टुरेन्टहरुमा जान सक्नुहुनेछ ।